ထမင်းစားပြီး ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အလေ့အထများ ~ SAI SENG SERK
Home » HEALTH » ထမင်းစားပြီး ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အလေ့အထများ
ထမင်းစားစားပြီးချင်း၊ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ စားစားပြီးချင်း ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ထမင်းစားစားပြီးချင်း ဆီးကရက် ၁ လိပ် သောက်ခြင်းဟာ ၁၀ လိပ်သောက်တာနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သက်သေပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးလိပ် အရမ်းသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ အစာစားပြီးချင်း မသောက်သုံးသင့်သေးပါဘူး။
၂။ အသီးချက်ခြင်း မစားရ
အချို့ က ထမင်းစားပြီးရင် အချိုတည်းအနေနဲ့ သစ်သီးဝလံတို့ကို ချက်ချင်းစားကြ ပါတယ်။ အမှန်တော့ ယင်းဟာ ကောင်းတဲ့ အထတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝမ်းမှာ လေခံတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်း လေထိုးလေအောင် ဖြစ်ဖို့ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ ထမင်းမစားမှီနဲ့ ထမင်းစားပြီး အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက် ခြားပြီးမှ သစ်သီးဝလံ စားသုံးဖို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
၃။ လက်ဘက်ရည် မသောက်ရ
လက်ဘက်မှာ အက်ဆစ်ဓာတ် ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားစားပြီး လက်ဘက်ရည် သောက်ရင် စားထားတဲ အစာများကို ပရိုတိန်းဓာတ် တိုးပွားစေပြီး အစာချေဖျက်ရန် ခက်ခဲသွားပါတယ်။ အစာမကြေ၊ ရင်ပြည့် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ က အစားစားနေတုန်းတော့ ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့ အစားစားပြီးမှ ခါးပတ်လျော့တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ကောင်းတဲ့ အလေ့အထ မဟုတ်ပါဘူး။ အစာအိမ်နဲ့ အူကို လိမ်စေပြီး အူလမ်းကြောင်း ပိတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ထမင်းစားပြီး တကယ် ရေမချိုးသင့်ပါဘူး။ ရေချိုးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက သွေးကို ခြေဖျား၊ လက်ဖျားအပြင် အခြား ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဆီ သွေးစီးဆင်းမှုအား ကောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်ထဲမှာ သွေးနည်းနည်းပဲ ရှိပါတယ်။ အစာချေဖျက်ဖို့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားစားပြီးချင်း လမ်း တစ်ရာ လျှောက်ရင် အသက်၁၀၀ နေရမယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒါဟာလည်း မှားယွင်းတဲံ အလေ့အထ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အတွက် စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားစာမှ အာဟာရဓာတ်များကို အစာချေဖျက် စနစ်က လုံလောက်စွာ မဆုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားသော အကျိုးဆက်များလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
အစား စားပြီးချင်းလည်း ချက်ချင်း မအိပ်သင့်ပါဘူး။ ချက်ချင်း အိပ်လိုက်ရင် အစာချေဖျက်မှု စနစ်က ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ အူလမ်းကြောင်းကိုလည်း သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဝမ်းထဲကို Gastric acid တိုးစေပါတယ်။
အထက်ပါ ၇ ချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ် အာဟာရဓာတ်အတွက် စားသုံးတဲ့ အနှပ်တိုင်းမှာ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတ်။
Shan Poem (ꩀ)
ံHISTORY OF THE SHAN STATE
Shan Poem (꨿)
လေးစားထိုက်တန်သူ . . .
ဗိုလ်နေ၀င်း လက်စဖျောက် သုတ်သင်တာ ခံလိုက်ရတဲ. သီပေါ...
သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် နဲ့သြစကြီးယားသူ အင်ဂျီ ...
ရှမ်းအက္ခရာ ၁၉ လုံး(ပုံပါ)
Shan Poem (꨾)
Shan Poem (꨽)
Shan Poem (꨼)
ဝꨓ်းꨅိူဝ်ꨵ ꨅꨤတ်ꨳꨅိုဝ်ꨳတꨯး 67
စောပါသေးတယ် လို.ကျွန်တော်ထင်ပါသည် ... ...
ꨀွပ်ꨳတꨯးꨡမ်ꨲ ꨕွမ်ꨵ ꨀꨓ်
တစ်ချိန်က စင်ပြိုင်အစိုးရ (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စု ...
My appearance Political now !
အောင်ဆန်းကိုလေးစားတဲ.လူထဲမှာ ကျွန်တော် မပါ
အောင်ပန်း ကလော နှင့် သာမိုင်းခမ်း
ဒီနေ့ညနေ၃ နာရီက စတင်လိုက်တဲ့၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေ...
လက်ထက်ဖို့ စဉ်းစားပြင်ဆင်နေပြီလား ညီမလေး
အသက်အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ အရက်လုံးဝပြတ်နည်း (အမျိုးသ...
ရှမ်းပါတီတွေ ပူးပေါင်းဖို့ ဘာကြောင့် မလွယ်သလဲ
လှချင်သူများ အတွက် ပါ
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ
အမျိုးသားတို့ ကြက်သွန်ဖြူစားသင့်သော အချက်သုံးရပ်